एकान्तवासबाट छोरीलाई चिठी …… – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१९ असार २०७७, शुक्रबार २०:२४ English
एकान्तवासबाट छोरीलाई चिठी ……
प्यारी छोरी मञ्जिला…
असिम प्यार अनि सम्झना ल !
घरमा तिमी मात्र एक्लो छैनौ, बुबा आमासंग रमाउंदै मामुको काखमा लट्पटिंदै दादासँग जिस्कंदै छौ । त्यो मलाई थाहा छ । तर पनि अरुसंग त फोनमा राम्रै कुरा हुन्छ तर मामुसँग कुरा गर्दै गर्दा फोन खोसेर ‘बाबा म नि आनी ….’ भनेर गनगन गर्दै तिमीले भन्ने कुरा के के हुने हुन् म बुझ्न सक्दिन । किनकि तिम्रो बोली राम्ररी फुटेको छैन । तिम्रो त्यो गनगनमा सायदै यस्ता कुरा हुन सक्छन् भन्ने यो बाबाले महशुश गरेको छ ।
बाबा तपाईं मलाई छोडेर कहाँ जानू भको ? मेरो माया लाग्दैन तपाईंलाई ? म पनि तपाईंसंगै आउँछ, लिन आउनु न ह‌ै । मलाई माम खाएन भनेर मामुले पनि गाली गर्दै कोच्याईदिनु हुन्छ, दादाले मोवाईल खेल्न दिंदैन, बच्चाले चिया खानु हुंदैन भनेर मामुले दिनुहुन्न, दूध खा भन्नुहुन्छ, मलाई दूध खान मन लाग्दैन क्या बाबा । तपाईंसँग काठमाण्डुमा हुंदा पनि मसँग दिनभरी खेलेर कहिल्यै बस्नुहुन्न थ्यो, तैपनि बिहान बेलुका त भेट हुन्थ्यो, तपाईं अफिस बाट आउँदा गेट खोल्ने बित्तिकै म कत्ति रमाउंथे है बाबा ।
अफिस बाट आउँदा जहिले पापा ल्याएको मैले कहाँ बिर्स्या छु र ? हेर्नू न बाबा ऐले त पापा पनि कसैले ल्याईदिंदैनन् । सांची बाबा तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ? आज २० दिन भन्दा बढी भैसक्यो किन नआउनु भाको ? मेरो माया लाग्दैन बाबा तपाईंलाई ? हेर्नू त बाबा तपाईं हुंदा म मुने (बाख्राको पाठो)सँग डराउंछे भन्नुहुन्थ्यो नि बाबा ऐले म मुनेलाई काखमा राखेर माया गर्ने भैसकें नि, अनि आमासंगै मुने हेर्न जान्छु पनि । घरको भर्याङ्ग चढ्न नसकेर रुन्थी भनेर जिस्क्याउनु हुन्थ्यो नि बाबाले ऐले त म भर्याङ्ग चढेर बरण्डामा सजिलै जान्छु नि, त्यति मात्र कहां हो र, यहाँ त ठूलो भैंसी छ ,त्यसको बच्चा पनि छ मलाई भैंसीले कस्तो माया गर्छ नि बाबा
मैले गर्नसकेका यी सबै काम हेर्नलाई आउनु न छिटो बाबा म अँगनमा खेल्छु, अनि फोहोरी भईस् भनेर गाली गर्नुहुन्छ क्या मामुले म आँगनमा नखेलेर कहाँ खेल्नु त है बाबा आदि आदि !
तर छोरी तिम्रा भावनाहरु मैले नबुझेको कहाँ छु र ? परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा म तिमीलाई कसरी बुझाउं छोरी ? दादाको स्कुल बिदा भएपछि दुई दिन अगाडि अर्थात चैत्र ७ गते तिमीलाई नै मैले घर लगेको हुं, अफिसको कामले बिजी भएका कारणले तिमीलाई मामुसँगै छोडेर म यता ९ चैत्रमा फर्किएँ । तर कोरोना भन्ने भाईरस सबै देश तिर फैलिएकाले र नेपालमा पनि त्यस्को असर देखिईसकेकाले गर्दा घरबाहिर ननिस्कनु भनेर १० गते नै राती देखि म पनि कोठामै छु छोरी । बाहिर निस्कन पनि नपाउने भएकाले वा देशै लकडाउनमा भएकाले म तिमी भएको ठाउंमा आउन नसकेको, लकडाउन नै हुन्छ भन्ने था भएको भा म पनि तिम्लाई छोडेर कहाँ आउँथे र ? मलाई झन् तिम्रो झझल्को छिनछिनमै आउँछ । तिमीसँगै खेल्न पाए दिन पनि कत्ति चांडै बित्थ्यो नि छोरी, म यहीं काठमाण्डु मै त छु नि, तिमीले त्यति धेरै प्रगति गरिछौ, तिमीले गर्ने क्रियाकलापहरु म आँखै अगाडि हेर्न कत्ति उत्सुक छु नि छोरी तर बाध्यता छ बुझिदेउ न है । यही बेलामा तिम्रो मामुको मोबाईल बिग्रिएर फेसबुक पनि नचलेकाले म्यासेञ्जरमा भिडियो कल गर्ने मौका पनि गुमाएको छु । तिमीले नै मामुको मोबाईल पानीमा हाल्देकी रे नि हगि ? खुलेको बेला कहिल्यै घर बस्ने हैन अब बन्द छ बस्नुस् न एक्लै भनेर तिम्रो मामुले पटक पटक हानिरहने डायलग गोली जत्तिकै नलागेको कहाँ हो र ?
छोरी तिम्लाई गाली गर्ने मामुलाई म सम्झाउंछु, दादालाई पनि बुनुलाई मोवाईल दे भन्छु, अनि दिन्छ नि है । तर तिमी ज्ञानी बन्नु ल । बुबा, आमासँग पनि झुम्मिनु, बुबा आमा फेरि रुनुहुन्छ नि तिमी मानिनौ भने त ।
म त यहीं नजिकै छु अनि म पनि एक्लै छैन अंकल आण्टी र सन्जु दिदी पनि सँगै छन् । छोरी त्यसमा पनि १ महिना जति त तिमीसँग भेट नहुने त होला तर कति बाबाहरु त तिमी जस्तै छोरीलाई छोडेर बर्षौंदेखि बिदेशिएका छन् ,तिनीहरुलाई कति पीडा हुंदो हो हैन र ?
छोरी तिमीलाई चाहिने सबै चिजहरु को म ब्यबस्था गरुंला नि है ! कामना गरौं ल, चांडै देशको परिस्थिति सहज हुनेछ अनि बाबा छोरी भेटेर दिनभरि गन्थन गरुंला नि हुन्न ?
मामु, दादा, आमा बुबा र आयुष दादालाई पनि बाबाले धेरै सम्झेको छ भन्देउ ल छोरी …..
सुरक्षितसंग बस्नु है
पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् !!
उही तिम्रो बाबा
हालः काठमाण्डौ नेपाल
(लकडाउनको १८ औँ दिनमा लेखिएको पत्र)
२९ चैत्र २०७६, शनिबार १९:२१ मा प्रकाशित
लकडाउनमा बढ्दो आत्महत्या	२७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार २३:१०